Sacuudiga oo dad dhaawac ah ka qaaday Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta dalkeeda u qaaday qaar ka mid ah dadkii bishii hore ku dhaawacmay qaraxii Hotel Central iyo dad kale oo ku dhaawacamy qaraxyadii Alshabaab ku qaadeen madaxtooyada magaalada Baydhabo ee xarrunta gobolka Baay.
Laba diyaarad oo Sacuudigu leeyahay oo maanta ka cago dhigatay Garoonka Aadan Cadde, ayaa waxaa middi lagu qaaday dadkii ku waxyeeloobay Central Hotel, iyadoo diyaaradda labaadna lagu qaaday dadkii ku dhaawacmay weerarkii Madaxtooyada Magaalada Baydhabo.
Garoonka Aadan Cadde, ayaa waxaa ku sugnaa Masuuliyiin Dowladda Federalka Somaliya ka tirsan, mudadii laga qaadayay dhaawacyada.
Dowladda Soomaaliya ayaa Sacuudi Carabiya uga mahadcelisay gacan u fidinta dadka dhaawaca ah ee ay dalkeeda u qaaday, iyadoo dhanka kale dowladda Soomaaliya maanta cambaareeysay faragelin Sweden ku sameysay nidaamka garsoorka dalkaas.
Dadka maanta loo qaaday Sacuudiga ayaa qaarkood dhaawac yihin in ka badan bil iyo bar, halka kuwa dhaawacmay madaxtooyada ay Baydhabo ay dhaawac yihiin muddo labo todobaad ah.
1-dii bishaan Maasro ayaa dowladda Imaaraadka Carabtu dalkeeda caafimaad ugu qaadday 13 ka mid ah dadkii ku dhaawacay qaraxyadii Hotel Central ee dhacay 20-kii Febaraayo.